Subscribe | Fondation des Choisis de Jésus
Mba hisoratanao anarana handray ny Hevitra Isan’andro dia mba fenoy ny tapakila manaraka. Handray mailaka hanamafy izany ianao dia afaka misafidy izay sitrakao raisina avy aminay.
Mifandraisa amin'ny eritreritra ny andro
FAMPITANDREMANA MOMBA NY FAMPITANA NY HEVITRA ISAN’ANDRO
Ny iraka tanterahanay dia ny hanamora ny fampitana, fanazarana sy fambolena ny Fitiavana izay hafatry ny Tompo atolony ireo olom-boafidiny, ka misaotra anareo sahady izahay mampahafantatra ny Hevitra Isan’andro, sy ireo vokatra samihafa atolotray. Mankasitraka !
Na izany aza dia ataontsika am-pahendrena izany. Fantatrareo fa mahasorena ny mandray mailaka misy dokam-barotra tsy nangatahana. Mazava ho azy fa misy ny olona tsy vonona ny handray ireo Hevitra zaraintsika, koa ndeha hajaintsika izany.
Rehefa mandefa Hevitra Isan’andro aman’arivo indray mandefa dia mailo ny rafitra mitantana ireny mailaka ireny toy ny : Orange, Wanadoo, Hotmail, Yahoo sy ny hafa, ka mety hampifangaro antsika amin’ny olona manavesatra ny fampitana hafatra amin’ny zavatra tsy ilaina, satria misy ny manao izany. Lasa ho azy any amin’ny (spam) na hafatra tsy ilaina izany, na manasa ny mpanjifany hanao izany izy ireo. Raha lasa any tokoy ny hafatra alefantsika dia voatohana hatrany am-potony ny fandefasana ny hafatra satria voafaritra tahaka ny tsy ilaina izay hafatra rehetra avy aty amintsika.
Ohatra, raha mandefa ny Hevitra Isan’andro maromaro amin’olona izay tsy nangataka izany ianao dia mety alefany any amin’ny hafatra tsy ilaina izany. Ny orin’asa mitantana ny mailakany dia mety handrara ny fanaparitahana ny hafatra rehetra avy aty amintsika satria misy olona nanamarika fa tsy ilaina izany…
Izany no mahatonga antsika hitandrina sy handanjalanja rehefa mandefa ny Hevitra Isan’andro amin’ny olona izay tsy nangataka izany.
Eto am-pamaranana dia manasa anao koa izahay haneho fa Tianao ny pejy Facebook. Hahita lahateny maro ao ianao, anisan’izany ny Hevitra Isan’andro
Satria ny Fitiavana tia anao dia lasa fitiavana ianao….
Ny Ekipan’ny Olom-boafidin’i Jesoa